किताव जात्रा सकियो : बिजय कुमार उत्कृष्ट, जसराजलाई ५५ हजारको सम्मान : RajdhaniDaily.com
Homeकलाकिताव जात्रा सकियो : बिजय कुमार उत्कृष्ट, जसराजलाई ५५ हजारको सम्मान
किताव जात्रा सकियो : बिजय कुमार उत्कृष्ट, जसराजलाई ५५ हजारको सम्मान
काठमाडौं । किताब यात्रा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको किविता जात्रामा पुस्तक सम्बन्धि विभिन्न बहस भएका छन् । १७ माघबाट सुरु भएको सो जात्रा शनिबार सकिएको छ । ‘प्रेम साहित्य सम्मान’, ‘किताब जात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड’को घोषणासँगै जात्रा सकिएको हो । कोरोना प्रभावका कारण यस वर्ष ‘किताब जात्रा’ मासमिडिया र भर्चुअल मिडियामार्फत गरियो ।
यसपटक ‘प्रेम साहित्य सम्मान’ कवि जसराज किराँतीलाई प्रदान गरिएको छ । एक समारोहबीच जात्राको समापनसँगै पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा सो सम्मान नेपाली वाङ्मयमा विशिष्ट योगदान पु-याएको भन्दै किरातीलाई गरिएको हो । उनलाई ५५ हजार ५ सय ५५ रूपैयाँ र सम्मापनपत्र प्रदान गरियो । बुईपा– ६, खोटाङ्गका ७५ वर्षिय किराँतीलाई ‘ग्रामीण जीवन स्वयम् आत्मसात् गर्दै त्यहाँका सरल तर शक्तिशाली बिम्ब कविताका अनेकन आयाममा प्रयोग गरी उच्च काव्यिक मूल्यबोध स्थापित गर्न सफल भएको’ ठहर गर्दै साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष ऋषिराम अधिकारीले बताएका छन् । किराँतीलाई ‘किताब जात्रा’मा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ–हरिवंश आचार्यले सो सम्मान प्रदान गरे । सम्मानपश्चात बोल्दै किराँतीले आफूले कविता लेख्दा कहिल्यै पनि सम्मान वा पुरस्कारबारे नसोचेको बताए, ‘मैले पढ्न पाएको पनि होइन र लेख्छु भन्ने लागेको पनि थिएन । गाउँमै बसेर स्वअध्ययन गर्दै कविता लेख्न थालियो । राम्रो लेखियो कि लेखिएन भन्ने पनि सोच्दै नसोची लेखियो र यो सम्मान पाउँदा राम्रै लेखिएछ कि भन्ने लागिरहेको छ ।’
त्यस्तै, यस वर्षको ‘किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड’ विजयकुमारको किताब ‘सम्बन्धहरू’ले प्राप्त गरेको छ । अनलाइन बुकसेलिङ प्ल्याटफर्म ‘किताब यात्रा डटकम’ सञ्चालन गरिरहेको किताब यात्रा प्रा.लि.ले ‘किताब जात्रा’को अवसरमा आफ्नो प्ल्याटफर्मबाट सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई हरेक वर्ष यो अवार्ड दिने गरिएको किताब यात्राका सिइओ विकेश भट्टराईले जानकारी दिए । बिजय कुमारलाई उनलाई फाउन्डेसनका अध्यक्ष अधिकारी र लेखक बुद्धिसागरले अवार्ड प्रदान गरे ।
विशेष अवार्डसहित सम्मानित भएका विजयकुमारले भने, ‘कुनै कृति बिक्री हुँदैमा उत्कृष्ट हुने र बिक्री नहुँदैमा नराम्रो हुने होइन । तर, कुनै पुस्तक धेरै पाठकले पढ्छन् भने त्यसको गुणवत्ताको राम्रो मूल्यांकन हुन्छ र यस्ता अवार्डले त्यसको परख गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।’ पाठकले मन पराएको कृतिलाई विशिष्ठ पहिचान दिन यस्ता अवार्डले भूमिका खेल्ने उनले बताए ।
जात्राको सन्दर्भमा किताब यात्रा डटकमले विशेष छुटसहित किताब खरिद गर्न पनि सकिने गरी ‘किताब यात्राको किताब जात्रा अफर’ सञ्चालन गरेको किताब यात्राका निर्देशक कृपेशकिशोर घिमिरेले बताए ।
जात्रामा सात विमर्श सत्र सञ्चालन भएको थियो । पहिलो सत्रमा ‘कहाँ छौं हामी ?’ शीर्षकमा भूषिता वशिष्ठको सहजीकरणमा लेखक डा. सञ्जीव कुमार उप्रेती, बुद्धिसागर र दुर्गा कार्कीले बहस गरेका थिए । दोस्रो सत्रको बहस ‘शब्द पछ्याउँदै जाँदा’ शीर्षकमा महिला लेखकहरू माया ठकुरी, भुवन ढुङ्गाना र भागिरथी श्रेष्ठ सहभागी थिए । कवि शकुन्तला जोशीले बहस सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
तेस्रो सेसनमा ‘पर्दाभित्र, पर्दाबाहिर’ शीर्षकमा निर्देशक प्रकाश सायमीको सहजीकरणमा नायक राजेश हमाल र नायिका करिष्मा मानन्धरले आफ्नो पठन अनुभूति सार्वजनिक गरेका थिए । सेसनअघि बलिउड कलाकार सोनु सूद मन्तव्य प्रशारण गरिएको थियो ।
‘अँध्यारोबाट उज्यालोतिर’ शीर्षक रहेको सेसनमा डा. सन्दुक रुइत, महावीर पुन र कुलमान घिसिङले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए । जात्रामा सप्ताव्यापी रुपमा यस्ता थुप्रै बहसहरु भए ।
काठमाडौं । सत्ताको प्रमुख बागडोर सम्हालेको दल नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिइसकेको छ । गत १८ भदौबाट कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागेको हो । अहिले कांग्रेसका वडा...
केन्द्रीय कारागार पठाइएका कैदीमा कोरोना पुष्टि, कारागारमा भेटघाट रोक
सिन्धुपाल्चोकको जुगलका पहिरो पिडितलाई द बर्गर हाउसको सहयोग
‘१०१ फरेनहाइट ज्वरो आउँदा नाचेको गीत तिहारै आयो’